US sees promise in Zimbabwe economic moves | eNCA
Tuesday 23 October 2018 - 5:13pm
WASHINGTON - The top US diplomat for Africa on Tuesday voiced optimism over economic reforms by the new government in Zimbabwe, which remains under sanctions dating from Robert Mugabe's 37-year reign.
Tibor Nagy, the assistant secretary of state for African affairs, said that Zimbabwe's level of education and infrastructure meant it stood to enjoy "dramatic economic progress" if the right policies were put in place.
"We are very much encouraged by some of the things they say; we are now looking for some concrete examples of moving forward," Nagy said of the Zimbabwean leadership.
"I can tell you that Zimbabwe is another country that the American business community could be very excited by based on concrete achievements," he told a press conference by telephone with African journalists.
READ: Zim economic crisis ‘under control’: officials
The newly-elected president, Emmerson Mnangagwa, has vowed economic reforms and sought to woo foreign investors back to Zimbabwe, which under Mugabe saw hyperinflation so extreme that the country printed a 100-trillion-dollar note.